नयाँ सरकारलाई खेलकर्मीको प्रश्न
बढ्दो बजेट, राजनीतिक नेतृत्वको चासो र बढ्दो ग्ल्यामरका कारण नेपाली खेलकुद पछिल्ला केही वर्ष चर्चामा छ । सामान्य अखबारी समाचारलाई आधार मान्ने र यस क्षेत्रका अन्तर्निहित विषयबारे जानकारी नभएकाका लागि यो क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको भ्रम पनि त्यत्तिकै छ । तर, वास्तविकता नेपाली खेलकुद क्षेत्रको पछिल्लो आधा दशकको समय सबैभन्दा विकृतिजन्य र घिनलाग्दो रह्यो । यसको तात्पर्य यसअघि नेपाली खेलकुद स्वच्छ थियो भन्ने होइन । मतलब यो हो कि नेपाली खेलकुद सबै क्षेत्रमा गिर्दो अवस्थामा थियो । तर, पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदका केही घटना मात्र आधार मान्ने हो भने आम नेपालीै आत्मग्लानीको अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ । खेलकुदको त्यसै घिनलाग्दो अवस्था रहिरहेको समयमा नेपाली राजनीतिले अब भने नयाँ मोड लिएको छ । यसबाट नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
दुई वामपन्थी दलले उठाएको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारालाई गत आम निर्वाचनमा नेपालीले स्वीकार गरे । धेरै नेपाली समृद्धिको कुरामा आशावादी रहे पनि यी दुई दलीय गठबन्धनले देशलाई समृद्धितर्फ डोहो¥याउने आधार भने देखिएको छैन । हुन सक्छ, केही राजनीतिक विश्लेषकले भनेझैं कार्यकर्ताका लागि राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त अवसर यो नै नहोस् ।
आर्थिकरूपले कुनै पनि देश या समाज समृद्ध हुने या गरिब हुने मुख्य मापदण्ड हुन्छ नै । कमाउनेभन्दा खर्च गर्नेको सक्रियता जहाँ हुन्छ, त्यहाँ गरिबी स्वाभाविक कुरा हो । काम नगरीकनै वा उत्पादनमा कुनै भूमिका नभई जिवीकोपार्जन गर्नेहरू समाजका सबैभन्दा ठूला समस्या हुन् । कुनै सीप नभएका, कुनै विषयको जानकारी नभएका, श्रम गर्नलाई कठिन मान्ने र राजनीतिको नाममा जीवनयापन मात्र होइन, विलासिताका सबै कुराको उपयोग गर्ने एउटा ठूलो समूह नेपाली समाजमा छ । माने पनि नमानेपछि यो समूहको लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढीको हिस्सा नेपाली कांग्रेस या एमालेको राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा जिन्दगी बिताउने कै छ ।
नेपाली खेलकुदमा समय उल्लेखनीय देखियो । कुनै विषयको जानकारी नभएको, केही शिक्षा पुर्जा भएर आफूलाई बौद्धिक भन्न रुचाउने, कोही त्यो पनि नभएका, कुनै श्रम गर्न नचाहनेको जमात खेलकुदमा देखियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा राष्ट्रिय संघको संख्या दुई सयको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ परिषद्ले वर्षभरिको बजेट सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्दैन । त्यो हिम्मत नहुनुको कारण प्रस्ट छ, यो वितरण प्रणाली आम नेपालीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था नै छैन । खेलकुदको केन्द्र त्रिपुरेश्वरमा या सातदोबाटोमा दुवै स्थानमा यस खाले राजनीतिक कार्यकर्ताको बेजोड उपस्थिति देखिन्छ । जुन समूहको चाहना जे भए पनि खेलकुदबाहेक अन्यत्र प्राविधिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप त्यो समूहका लागि सहज छैन । स्वास्थ्यमन्त्री आफ्नो दलको भएको बाहनामा अस्पतालमा पुगेर चिकित्सकको मानमर्दन गर्ने हिम्मत आजसम्म त्यो समूहको छैन । कन्स्ट्रक्सन साइटमा पुगेर इन्जिनियरलाई मानमर्दन गर्ने साहस पनि त्यो समूहको छैन । बरू के चाहिँ हो भने कुलमान घिसिङको कार्यकाल अघिसम्म दक्ष प्राविधिक भनिने पनि त्यसै प्रवृत्तिका राजनीतिक कार्यकर्ताझैं भ्रष्ट थिए । यिनै भ्रष्टका कारण हामी वर्षांै विनाकरण अँध्यारोमा जकडियांै । त्यो अँध्यारोका कारण राजनीतिक नियुक्ति पाएर दोहन गर्ने एकखाले चरित्र हो भन्ने भनिरहनु पर्दैन ।
प्रसंग के हो भने विद्युत् प्राधिकरणमा गएर दोहन त भयो तर, घिसिङ कार्यकाल अगाडिको त्यो लुट र दोहन पनि एउटा निश्चित योग्यता पुगेकाहरूले गरेका थिए । तर, कुनै पनि प्राविधिक ज्ञान नभएकाले वर्षौं राज्यको दोहन गर्ने क्षेत्र भने खेलकुद परिषद् नै बन्यो । त्यसैको शृंखला माथिल्लो उचाइमा पुगेको छ । दुई सय हाराहारीको संघ यसैका उदाहरण हुन् । परिषद् बोर्डमा कसले कति खेलकुद विकासमा सक्रिय रह््योभन्दा पनि बढी कसले कत्ति लाभ लियो भन्ने होडबाजी चलेको छ । गत एसियाडमा जुन खेलका खेलाडी विदेश भागेका थिए, त्यसै खेलका मेनेजर सदस्य सचिव बनेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्यले नै विदेश मान्छे पठाउने भनेर ठगी गरेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ । परिषद् त प्रशासन जान्नेले चलाउने हो, खेलकुद जान्नेले होइन भन्ने कुतर्क राज्यको दोहन गरेरै जीवनयापन गर्न पल्केका राजनीतिक कार्यकर्ताले बारम्बार गरेको सुनियो ।
यसबीचमा नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सामान्य अनुमान हो, हालका दुई दल माओवादी केन्द्र र एमाले अब एकजुट हँुदैछन् । यिनीहरूको शासन पनि लामो समय रहनेछ । त्यो शासन लामो समय रहनेछ । यसकारण यी दुई राजनीतिक नेतृत्व समझदार नभएमा हालको दुरवस्था अझ दर्दनाक हुने निश्चित नै छ । यसकारण रंगशाला परिसरबाटै दाहाल–ओलीका सामु केही प्रश्न जरूरी छ ? यसको जवाफ तत्काल खोज्नुको विकल्प पनि छैन ।
राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिने खेलकुद क्षेत्र एउटा पार्टीको राज्य दोहनको विषय बनाउन खोजिएको हो कि होइन ? नयाँ बानेश्वरको कुनै होटलमा बस्ने कुनै एक राजनीतिक दलको एउटा गुटको भेलाले सिंगो खेलकुद चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ कि हँुदैन ? खेलकुद जानकार व्यक्ति प्रशासनमा रहने कि यस सवालमा कुनै जानकारी नभएकाले यसको शासन चलाइरहने ? एमालेले खेलकुद महासंघको गठन गर्दा खेलकुदका कुनै जानकारी नभएकाको प्रभाव रह््यो । त्यस्तै खालका व्यक्तिहरूले राज्यको निकायमा निरन्तर अवसर पाइरहे । के यो शृंखला यथावत् रहने हो ? होइन भने यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
खेलकर्मीका आँखाले वर्तमान राज्यशक्तिसामु गर्नेपर्ने थुप्रै प्रश्न छन् । राज्यको सम्पत्तिमा भ्रमण आदेश भरेर कत्ति रकम छुट्याइन्छ र यसको उपलब्धि के हो ? यसको हिसाब नेतृत्वले माग्ने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ? माग्दैन भने यसरी बुझ्नुपर्छ, यसको कमिसन माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेकै छ । सबैले बुझेको तथ्य हो, वर्तमान नेपाली खेलकुद एउटा दलको एउटा गुटगत समूहले चलाएको छ । विगतमा इन्टरनेटबाट बत्ती बेच्ने जस्तो हावादारी कुरा गर्ने नेताको गुटले शासन गरेको क्षेत्रमा प्राविधिक व्यक्तिको महत्तपुर्ण हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पनि बेकार हो ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अर्को प्रश्न छ । मिल्न आँटेका दुई दलको भ्रातृसंगठनमा एउटामा खेलकर्मीको बाहुल्य छ भने अर्कोमा केही खेलकर्मी र धेरैजसो गैरखेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । यदि शासनमा सुधार र राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहनको अन्त्य अबको गठबन्धन नेतृत्वले चाहेकै हो भने यिनीहरूको भ्रातृसंगठनको स्वरुपबाट प्रस्ट हुन्छ । यो खेलकर्मीको संगठन बन्नेछ या जसरी विगतमा एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा हार्ने र युवा संघको लहान महाधिवेशनमा हार्नेका लागि खेलकुद महासंघको रूपमा डम्पिङ साइट बनाइए जस्तो मात्र हुने हो ।